fampidirana annealing tube | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
induction tubing induction
Inona ny fampidinana fanasitranana?
Ity dingana ity dia manafana metaly efa nandalo fanodinana lehibe. Ny fanindronana induction dia mampihena ny hamafiny, manatsara ny fivezivezena ary manamaivana ireo fihenjanana anaty. Ny fitambaran-tena amin'ny vatana manontolo dia dingana iray izay ananevahana ny workpiece feno. Amin'ny fanjairana seam (fantatra kokoa amin'ny anarana hoe seam normalizing), ny faritra misy ny hafanana vokarin'ny fizotran'ny welding ihany no tsaboina.
Ny fametrahana annealing sy ny normalization amin'ny induction dia manome hafanana haingana, azo itokisana sy voafantina, fanaraha-maso maripana marina, ary fampidirana mora miditra. Ny induction dia mitsabo ny sanganasan'ny tsirairay amin'ny famaritana marina, miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso tsy tapaka manara-maso sy mandrakitra ny fizotran'ny dingana rehetra.
Ny fametrahana annealing ary ny normalizing amin'ny induction dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fantsona sy fantsona. Izy io koa dia mampifangaro tariby, vy vy, lelatra antsy ary fantsom-by. Raha ny marina, ny fampidirana dia mety indrindra amin'ny asa rehetra amin'ny fitantanan-tena.
Ny rafitra fanakambana DAWEI Induction tsirairay dia natsangana mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takiana manokana. Ny fon'ny rafitra tsirairay dia
mpiorina fanodinana DAWEI Induction izay misy fikajiana enta-mavesatra mandeha ho azy ary anton-kery tsy miova amin'ny ambaratonga rehetra. Ny ankabeazan'ny rafitray dia misy koa ny vahaolana fitantanana sy fanaraha-maso namboarina.
Sokajy FAQ Tags annealing, fanasitranana avo dia avo, annealing matetika avo ambonin'ny, induction aegaling, induction tubing induction, Inona ny fampidinana fanasitranana?